Nanampy azy ireo ny tanora Malagasy dimy avy amin`ny CEMEAM (Centre d`Entrainement aux Methodes d`Education Active) nandritra ny 10 andro. Niaina niaraka sy nifanakalo traikefa izy ireo na tsy mitovy aza ny kolontsaina sy ny teny ampiasaina hiseraserana. Nivoitra tao anatin`ny fiarahana koa ny sahanasa maro ahafahana mamolavola fomba ibeazana ny tenany. Tsy ny fibeazana ihany fa hanana ny toerany koa ny fialamboly. Tafiditra amin`ny tetikasa Erasmus-Building Bridges ny fametrahana tetezana ahafahan`ny tanora aty amin`ny ranomasina Indianina sy any Eoropa ny hetsika izay nosantarina tany La Reunion ny volana martsa 2018. Notohizana tamin’ny fivahinianana tanora 4 avy aty amin’ny Ranomasimbe Indiana nandritra ny iray volana tany Romania ny tetikasa, nahafahan’izy ireo nizatra amin’ny asa misahana tanora. Vao nofaranana tamin’ny fihaonana tanora sy mpisehatra amin’ny tontolon’ny tanora eo amin’ny 20 eo ho eo tany Mayotte ny 6 ka hatramin’ny 13 jona teo ity tetikasa BUILDING BRIDGES ity ka nanaovana tombana sy jery todika ny dia niaraha-nanao nandritra ny herintaona mahery. Tafapetraka izany izao ny tetezana ahafahan’ireo tanora sy fikambanana ireo manohy ny fifanakalozana sy ny fiaraha-miasa, ary haminavina tetikasa vaovao. Fikambanana dimy avy aty amin`ny ranomasimbe indianina sy roa avy any Eoropa no nifandray tamin`ny alalan`ity tetikasa Building Bridges ity. Manohana ny tetikasa amin`ny lafiny vola ny Vondrona Eorpeanina.